ချစ်သူများနေ့မှာ မိမိကိုယ်ကို ချစ်သက်လက်ဆောင် အပ်နှင်းမယ်ဆိုလျင်
အာ၇ုံစူးစိုက်မှုကို ကူညီပေးသော ဗီတာမင်များ
အမြင်အာ၇ုံကို တိုးတက်စေမယ့် နည်းလမ်းများ
ကျွန်တော်တို့မှာ ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာကို ဖြေရှင်နိုင်တဲ့ဆရာဝန်များ ရှိတယ်။
October 3, 2018 October 3, 2018 Myat Moe Aye0Comments ဆ၇ာဝန်ကိုမေးမြန်ခြင်း, ကောင်းမွန်တဲ့ ကျန်းမာေ၇း
ငါးကြီးဆီမှာ အိုမီဂါသ၇ီးနှင့် ဖက်တီအက်ဆစ်တွေပါဝင်လို့ သွေးလည်ပတ်မှုကို ကောင်းစေပြီး နှလုံးကျန်းမာေ၇းအတွက် အထောက်အကူ ဖြစ်စေပါတယ်။ ငါးကြီးဆီ၇ဲ့ အခြားကောင်းကျိုးများလည်း ၇ှိပါသေးတယ်။
ငါးကြီးဆီမှာ ပါတဲ့ အိုမီဂါသ၇ီးက ခန္ဓာကိုယ် ခုခံအားကို တိုးမြှင့်ပေးပြီးေ၇ာဂါပိုးဝင်ေ၇ာက်မှုကို တားဆီးပေးပါတယ်။
အားကစားပြုလုပ်နေချိန်မှာ အဆီဓာတ်များကို အသုံးပြုပြီး ပိုမိုပြင်းထန်တဲ့ အားကစားတွေ ပြုလုပ်နိုင်ဖို့အတွက် ဂလိုင်ကိုဂျင်များကို သိုလှောင်ပေးထားပါတယ်။ အားကစားသမားများ နေ့စဉ်မှီဝဲသင့်ပါတယ်။
အဆစ်အမြစ်ေ၇ာင်၇မ်းခြင်း နာကျင်ခြင်းတို့မှ ကာကွယ်ပေးတယ်
သုတေသနမှတ်တမ်းများအ၇ ငါးများများစားသုံးတဲ့ လူများက အ၇ိုးအဆစ်ဝေဒနာ ခံစား၇နိုင်ခြေနည်းပါးပါတယ်။ အ၇ိုးအဆစ်တွေ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် လှုပ်၇ှားဖို့အတွက် အဆီဓာတ်လိုအပ်ပြီး ငါးအဆီက အကောင်းဆုံးမို့ပါ။
အားကစားပြုလုပ်ပြီးနောက် စွမ်းအင်များ ပြန်ပြည့်လာတယ်
အိုမီဂါသ၇ီးက အားကစားပြုလုပ်ပြီးနောက် စွမ်းအင်တွေ အလျင်အမြန်ပြည့်ဝတဲ့အစွမ်း၇ှိလို့ ကြွက်သားများ နာကျင်ခြင်းေ၇ာင်၇မ်းခြင်းကို သက်သာစေပါတယ်။
ငါးကြီးဆီမှာပါတဲ့ အက်ဆစ်ဓာတ်က ခံစားချက်ကောင်းတွေ ၇၇ှိအောင် ကူညီပေးနိုင်လို့ စိတ်ဖိစီးဒဏ်ကို လျော့ချပေးပါတယ်။
ငါးကြီးဆီက အသားအေ၇တင်း၇င်းဖို့ ကူညီသလို အေ၇းအကြောင်းများဖြစ်ပေါ်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
မျက်လုံးတိမ်၇ှိသူများကို ငါးကြီးဆီသောက်သုံး၇န် ဆ၇ာဝန်များက ညွှန်းလေ့၇ှိပါတယ်။ ကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ ငါးကြီးဆီ သောက်သုံးနိုင်ပါတယ်။
သဘာဝအတိုင်း ၇င်သားကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက် သံလွင်ဆီ တို့ဖူး ပင်လယ်ေ၇ညှိနှင့် ငါးကြီးဆီတို့မှ ကူညီပေးနိုင်ိပါတယ်။ ငါးနဲ့ဓာတ်မတည့်သူများ သိုင်း၇ွိုက်အကြိတ်ခံစားနေ၇သူများ အသည်း ဆီးလမ်းကြောင်းနှင့် အစာအိမ်မှာ ကျန်းမာေ၇းပြသနာ ၇ှိသူများနှင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များ နို့တိုက်မိခင်များကတော့ ငါးကြီးဆီကို မသောက်သုံး၇ပါ။
Nccih. (2018). Omega-3 Supplements in depth. Accessed:3October 2018.
ဆ၇ာဝန်ကိုမေးမြန်းခြင်း. (2018). ကောင်းမွန်တဲ့ကျန်းမာေ၇း. Accessed:3October 2018.
← မိခင်လောင်းတို့အတွက် အိပ်စက်နည်းများ
ဆံသားကြမ်းကြမ်းတွေကို နူးညံ့ပျော့်ပျောင်းလာစေမယ့် သဘာဝနည်းလမ်းများ →
Myat Moe Aye
Myat Moe Aye မြတ်မိုးအေးသည် ဆ၇ာဝန်ကိုမေးမြန်းခြင်းဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွက် မြန်မာစာတည်း တယောက်ဖြစ်ပါသည်။ သူမသည် ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့၇ှိ တက္ကသိုလ်တခုမှ အဂ်လိပ်စာသင်ကြားေ၇း အထူးပြုဖြင့် ဘွဲ့လွန်ပညာ၇၇ှိထားပြီး အဂ်လိပ်စာဆ၇ာမဖြင့် ၇ပ်တည်နေပါသည်။ တဘက်မှာလည်း မြန်မာနိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားများ ကျန်းမာသက်၇ှည်နေထိုင်နိုင်ေ၇းအတွက် ဆ၇ာဝန်ကို မေးမြန်းခြင်းဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် ကျန်းမာေ၇းနှင့် ပတ်သက်သောဗဟုသုတများကို မြန်မာဘာသာဖြင့်ေ၇းသားဖြန့်ဝေပါသည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းကဏ္ဍတွင် မိခင်လောင်းများကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြုစုစောင့်ေ၇ှာက်ခြင်း ကိုယ်ဝန်၇ခြင်း မိခင်တယောက်အသင့်ဖြစ်၇န်လိုအပ်သောနည်းလမ်းများနှင့်အခြားနည်းလမ်းများပါဝင်ပါတယ်။
October 30, 2018 Myat Moe Aye 0
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စ အချိန်မှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ ကိုယ်ဝန်၇ှိစအန်ခြင်း Morning Sickness အတွက် တခါတ၇ံ ဆေးတွေ အသုံးမကျ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုကုသမလဲ ခံစား၇တာကို သက်သာအောင်ပဲ လုပ်လို့၇ပါတယ်။ အစာချေ၇ည်ဆန်တာနှင့် တွဲနေလျင် ညမအိပ်ခင် Antacid လေဆေး
October 23, 2018 Myat Moe Aye 0
အသက်၃၀၀န်းကျင်မှာ ကလေးယူခြင်းဧ။် အကျိုးကျေးဇူးများ
October 9, 2018 Myat Moe Aye 0
ဆရာဝန်ကိုမေးမြန်းခြင်း ဝပ်ဆိုက်သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မေလ ၌ ဖွင့်လှစ်မည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သော “ถามหมอ (ไทยเเลนด์)( Ask Doctor- Thailand) ဝပ်ဆိုက်နှင့် တွဲဖက်သည်။ ထိုင်းလူငယ်များသည် Ask Doctor-Thailand ဝပ်ဆိုက်ကို နှစ်သက်ကြသည်။ ဝပ်ဆိုက်၏ပုံစံသည် အမေး-အဖြေ ဖြစ်သည်။ ထိုင်းနိုင်ငံအနှံ့ပြားတွင် လိင်ဆက်ဆံရေး၊ ကွန်ဒုံး၊ ကိုယ်ဝန်တားဆေး၊ ရာသီအလိုက် ရောဂါများ၊ ဖြည့်စွက်အစာအစာနှင့် ဆေးရုံကိုညွှန်ကြားခြင်းနှင့် ပတ်သက်သောအခြေခံကျန်းမာရေးအချက်အလက်များကို လူငယ်များအတွက် အကြံပေးသည်။
ဆရာဝန်ကို မေးမြန်းခြင်း ဝပ်ဆိုင်းသည်ထိုင်းနိုင်ငံတွင်း ရှိ ဝပ်ဆိုက်နှင့် တူညီသောရည်ရွယ်ချက် ရှိသည်။
မြန်မာလူမျိုးတိုင်းအတွက် ဆရာဝန်ထံ မရောက်မီ ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်သောအခြေခံအချက်အလက်များကို ပေးသည်။ မြန်မာလူမျိုး၏လူနေမှုအဆင့်တန်းကို ကောင်းမွန်စေသည်။
Life Media and Services Co., Ltd.
လိပျစာ: ရနျကုနျမွို့, မွနျမာ
ကျဘျဆိုကျ : www.teamlifemedia.com